Inona no atao hoe SEO? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny S	» SEO
SEO no fanafohezana ny Search Engine Optimization.
Ny tanjon'ny SEO dia ny manampy vohikala na votoaty "hitana" amin'ny Internet. Ny motera karoka toa an'i Google, Bing, ary Yahoo dia mijery votoaty an-tserasera mba hahitana ny maha-zava-dehibe azy. Ny fampiasana teny fanalahidy mifandraika amin'izany sy ny teny fanalahidy lava-rambony dia afaka manampy azy ireo hanondro toerana araka ny tokony ho izy ka rehefa manao fikarohana ny mpampiasa iray dia mora kokoa ny mahita azy. Betsaka ny lafin-javatra izay misy fiantraikany amin'ny SEO ary ny tena algorithmic variables dia miambina akaiky ny mombamomba ny fananana.